Taariikh nololeedkii Bui Tin, wariyihii loo diiday in lagu qoro buugaagta taariikhda - BBC News Somali
Taariikh nololeedkii Bui Tin, wariyihii loo diiday in lagu qoro buugaagta taariikhda
Image caption Markii Koonfurta Vietman ay ku biirtay waqooyiga sannadkii 1975-kii Bui Tin wuxuu ku sugnaa halkaasi
Markii ay dhacday xukuumaddii koonfurta Vietnam ee Mareykanka taageerada ka heystay sannadkii 1975-kii, Bui Tin halkaas ayuu joogay isagoo matalayay garabkii ay guusha raacday ee Vietnam-ta Waqooyi. Balse markii uu dagaalka dhammaaday wuxuu noqday qof la iska nacay, magaciisa waxaa laga tiray taariikhda dalka Vietnam.
Tin waxa uu geeriyooday isbuucaan isagoo ay da'diisa ahayd 90 sano. Wariyaha BBC-da ee Nga Pham ayaa ka soo warrameysa ninkan oo ay taqaannay.
Xilli galab ah oo ku beegneyd 30-kii bishii April ee sannadkii 1975-kii ayaa waxaa uu shir weyn oo muhiim ah ka socday aqalka madaxtooyada ee Saigon, halkaasoo ay ku shirayeen General Duong Van "Big" Minh iyo raggiisa.
Miis weyn oo hor yaallay ayaa waxaa saarnaa cunto iyo cabitaan loogu tala galay iyaga, balse cid cuneysay ma jirin oo waxaa laga fakarayay sida laga yeelayo xaaladda cakiran ee markaas taagneyd.
Xilligaas waxay ahayd dhowr saacadood uun ka hor markii ay taangiyada Waqooyiga Vietnam soo jabiyeen darbiga madaxtooyada.
General "Big" Minh isla markiiba waxa uu gudbiyay qoraal uu ku miijinayo in uu is dhiibayo waxa uuna ka sheegay raadiyaha in uu xilka ka dagay isagoo noqday madaxweynihii ugu dambeeyay ee dowladdii Saigon.
Image caption Waa sawirka "Big" Minh iyo Bui Tin sannadkii 1975
Bui Tin markaas waxa uu ahaa wariye ka tirsan Milatariga ahna labo xiddigle korneyl ah oo la shaqeeya ciidamada maamulkii Waqooyiga Vietnam ee markaas dagaalka ku gacan sarreeyay.
Waxa uu ahaa sarkaalkii ugu darajo sarreeyay ee ciidankii la wareegay madaxtooyada Saigon markii la sugayay in madaxweynaha laga adkaaday uu wareejiyo awoodda maamulka.
Waxaa lagu xasuustaa in uu madaxweynahaas ku yiri "Maxaad wareejisaa awood maba lihide."
Waxa uu aad ula faraxsanaa guusha u soo hoyatay garabkiisa.
Isaga iyo malaayiin kale oo reer waqooyiga Vietnam ah waxa ay muddo 30 sano ah u soo dagaallamayeen wax uu si adag u aaminsanaa in uu ahaa waajib diimeed.
"Maanta waa maalin farxadeed, nabaddi ayaa soo noqotay. Dagaalki wuu dhammaaday dhammaan dadka reer Vietnam way wada guuleysteen. Kaliya kuwa u daba dhaqayay Mareykanka ayaa guul darreystay," ayuu Mr Tin ku yiri warbaahinta.
Vietnam oo shaqada ka eriday masuul sare oo "musuqmaasuq sameeyay"
Muddo tobannaan sano ah markii ay kasoo wareegtay, taariikh qoreyaasha dalka Vietnam ayaa si buuxda u cirib tiray magaca Bui Tin iyo taariikhdiisa oo iliba.
Xitaa waxaa buugaagta taariikhda laga tiray sheekooyinka ku saabsanaa guulihii uu qeybta ka ahaa maalintaas taariikhiga ah ee la jabiyay maamulkii Koonfurta Vietnam.
Image caption Bui Tin oo salaamaya ciidammo Amerikaan ah
Sababta sidaas loo sameeyay waxay ahayd: in Mr Tin uu ka goostay dowladda uuna la saftay reer galbeedka.
Dagaalka ka dib, Vietnam ma aysan helin waxa loogu yeeray jannada ay soo wadeen maamulkii bulshaawiga ee xukunka qabsaday.
Dad fara badan ayaa ku hungoobay rajadii ay ka qabeen in ay xaalad fiican geli doonaan.
Markii uu bur buray xiriirkii taariikhiga ahaa ee Vietnam kala dhexeeyay Shiinaha uuna isku baddalay dagaal waxaa dalkaas ku habsaday dhaqaale darro baahsan iyo in ay ka go'doomaan caalamka intiisa kale.
Bui Tin waxa uu caro kula dhacay raggiisii ka tirsanaa dowladda laakiin markii laga dhigay tifaftire ku xigeenka wargeyska Nhan Dan waxa uu indhihiisa ku arkay tabar darrada dowladda ka heysatay la tacaallidda dhaqaale xumada.
Sannadkii 1990-kii mar lagu casuumay in uu ka qeyb galo shir ka dhacayay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayuu go'aansaday in uusan dib ugu laabannin magaalada Hanoi ee caasimadda u ah Vietnam iyo guud ahaan dalkaasba.
Lagama fileynin in uu tallaabadaas qaado maadaama loo arkayay in uu xubin muhiim ah ka ahaa xukuumadda.
Hase ahaatee hadalladii uu go'aankiisa ku sababeeyay ee uu ka sheegay wareysi uu BBC-da siiyay ayaa ruxay maamulkii ka arriminayay Hanoi.
Dad lagu haystay tuulo ku taal Vietnam oo la siidaayay
Do Van oo ah wariye rug caddaa ah oo ka tirsanaa laanta BBC-da ee waddanka Vietnam ayaa yiri; "Billowgii sannadkii 1990-kii waxaan billaabay in aan dareemo sida uu Mr Tin u sii nacayay dowladda. Bishii November waxaan ku kulannay Paris.
Ilaa inta uu ka geeriyoonayay, Mr Tin waxa uu ahaa qof ay mamnuuc ka tahay in uu cagta dhigo dalka Vietnam. Waxaa mamnuuc ka ahaa in ay wareystaan telefishinnada dalkaas.
Xitaa ma jirin hal idaacad ama telefishin ama wargeys soo hadal qaaday geeridiisa.
Image caption Bui Tin in later years - he was rarely able to see his family while he lived in exile in Paris
Wargeysyada aan dhimashadiisa wararkooda ku xusin waxaa ka mid ah qaar uu horay Tifatire uga soo noqday.
Tallaabadii uu Mr Tin uga goostay dowladda waxa ay saameyn xun ku yeelatay qoyskiisa, gaar ahaan sannadihii 1990-meeyadii. Xubnaha qoyskiisa ayaa su'aalo qallafsan la weydiin jiray iyagoo mararka qaarna la jir dili jiray.
Gabadhiisa oo lagu magacaabo Lien ayaa aabeheed markii ugu horreysay si toos ah ula kulantay sannadkii 2015-ki mar ay booqasho qarsoodi ah ugu tagtay magaalada Paris.
Dadka isaga yaqaannay waxa ay ogaayeen in uusan dib ugu noqon doonin Vietnam, laakiin Mr Tin wuxuu qabay in uu maalin uun ku noqon doono waddankiisa.
Riyadaas ayaa noqotay mid isaga la gashay iilka.